DataNumen BKF Repair - Kukwikwidzana Kuenzanisa
musha Products DataNumen BKF Repair Kukwikwidza Kuenzanisa
DataNumen BKF Repair kuenzanisa
DataNumen BKF Repair Kukwikwidza Kuenzanisa
Kernel Kudzoreredza kwe BKF 8.5.1 Stellar Phoenix BKF Kudzorera Software 2.0 Kudzoreredza kweBackup 3.0 Kupora data reMS Backup 1.0 SysTools BKF Gadzirisa 5.2.0.1 Gadzira My Backup 4.20
mutengo+ USD149.95 USD264 USD199 USD248.5 USD199 USD134.5 USD324.93
Avhareji Yekudzoreredza Rate * 99.58% 9.09% 9.09% 99.58% 9.09% 78.27% 9.09%
(5MB yakaora BKF faira) 100% 0% 0% 100% 0% 100% 0%
(50MB yakaora BKF faira) 100% 0% 0% 100% 0% 100% 0%
(100MB yakaora BKF faira) 100% 0% 0% 100% 0% 100% 0%
(500MB yakaora BKF faira) 100% 0% 0% 100% 0% 100% 0%
(1GB yakaora BKF faira) 100% 0% 0% 100% 0% 100% 0%
(2GB yakaora BKF faira) 100% 0% 0% 100% 0% 100% 0%
(4GB yakaora BKF faira)
(8GB yakaora BKF faira)
(10GB yakaora BKF faira)
(15GB yakaora BKF faira)
Dzese shanduro dze32bit Windows 98 / ME / NT haina kutsigirwa 98 / ME / NT / 2000 haina kutsigirwa 98 / ME / NT haina kutsigirwa 98 / NT / 2000 haina kutsigirwa 98 / NT / 2000 haina kutsigirwa 98 / ME / NT haina kutsigirwa
BKF Rudzi Rutsigiro
BKF Faira rakagadzirwa ne NTBackup ye NT4.x / 2000 / XP / Server 2003
Negadziriro yeparutivi Nzira Rutsigiro
Negadziriro yeparutivi Options Support
Shandisa zvakajairika nzira yekuchengetedza, wobva wasarudza "Nyorera iyi backup kune aripo backups" backup sarudzo.
Shandisa zvakajairika backup nzira, wobva wasarudza "Tsiva zviripo backups" backup sarudzo.
Dzoreredza maseti, mavhoriyamu, maforodha zvimiro uye mafaera mu BKF ikwidzwe. Vhoriyamu, dhairekitori harina kutsigirwa Vhoriyamu, dhairekitori harina kutsigirwa Dhataset, vhoriyamu haina kutsigirwa Dhataset, vhoriyamu haina kutsigirwa Vhoriyamu haina kutsigirwa Chimiro cheFolder hachina kutsigirwa
Dzosera akawanda-dhata uye akawanda-vhoriyamu BKF mafaira.
Kugadzirisa BKF mafaira pane zvakashata midhiya, senge floppy disks, Zip disks, CDROMs, nezvimwe.
Hapana manejimendi maropafadzo anodikanwa
Tsvaga uye sarudza iyo BKF mafaira kuti agadziriswe.
Windows Explorer yemamiriro ekubatanidza menyu.